म एक महिला हुँ, तर श्रीमानलाई बिगार्ने पनि महिला नै हुन, किन गर्छन महिलाहरूले नै यस्तो! सहमत भए एक शेयर गर्नुहोला। – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > म एक महिला हुँ, तर श्रीमानलाई बिगार्ने पनि महिला नै हुन, किन गर्छन महिलाहरूले नै यस्तो! सहमत भए एक शेयर गर्नुहोला।
admin February 6, 2020 जीवनशैली, समाज	0
मेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस! म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने पनि महिला नै हुन् ! हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्रष्टाचारि ज ड्या हा ! पर स्त्री गमन (बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने) एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ ! आफ्नो श्रीमानलाइ अनावश्यक तनाव (अरुको धन सम्पत्ती वा गहना सङ्ग तौलेर), अनावश्यक केयर (बारम्बार निगरानी केरकार), माइती वा साथीहरू आफन्तको सामु हेपेर वा होच्याएर बोल्ने यस्ता काम कहिले नगर्नुहोस् ।
नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्न ग्यारेन्टी ” सामाजिक सञ्जालमा राखिएका पोस्टहरु, गरिएका टिप्पणीहरु देख्दा ताजुब लागेर आउँछ। होइन, हामी नेपाली के भयौं यस्तो, हामीमा कुनै सकारात्मक भाव नै छैन कि जस्तो। यिनै विषयहरु मनमा खेलिरहेका थिए। यो नकारात्मक सोचले भरिएको समाज नै छोडेर कतै एकान्तमा गएर बसुँबसुँजस्तो लाग्ने भइसकेको छ। मनमा भएको खटपट कम हुन्छ कि भनी साँझ पशुपतिको आरती हेर्न जान मन लाग्यो।
बच्चाहरूलाई स्कुलका लागि प्लास्टिकको थैलोमा राखेर नदी पार गराउँदै विचरा बावुहरु (भिडियो सहित)